नेपालका ‘टोल फ्री’, एउटा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा लाग्दैन, लागे पैसा तिर्नुपर्छ
Home टेक समाचार नेपालका ‘टोल फ्री’, एउटा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा लाग्दैन, लागे पैसा तिर्नुपर्छ
शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ ५:४५
काठमाडौं । सामान्यतया ‘टोल फ्री नम्बर’ भनेर सुन्दा तपाईंको दिमागमा झट्ट के आउँछ ? पक्कै पनि निःशुल्क कल गर्न पाइन्छ भन्ने नै हो ।
अझ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने त कसैले टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ भने उक्त नम्बरमा सबै सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट कल लाग्छ । त्यो पनि निःशुल्क ।
तर, नेपालको हकमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । यहाँ त टोल फ्री नम्बर कुन कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ भन्दा पनि कुन टेलिकम सेवाप्रदायकको नेटवर्कबाट लिइएको हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
किन भने यदि कुनै कम्पनीले आफ्ना ग्राहकको सहजताका लागि नेपाल टेलिकमबाट टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ भने उसका एनसेल तथा स्मार्ट सेल प्रयोग गर्ने ग्राहकले उक्त टोल फ्रीमा कल गर्न पाउँदैनन् ।
त्यसो भए यो कस्तो टोल फ्री ? प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित भन्छन्, ‘अहिले हाम्रोमा जुन किसिमको टोल फ्रीको प्रचलन छ, त्यो वास्तवमा टोल फ्री नै होइन ।
किनभने हाल कुनै एउटा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकको सहजताका लागि नेपाल टेलिकमबाट टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गरायो भने टेलिकमका ग्राहकले मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन् । एनसेल र स्मार्टसेलका ग्राहकले त्यसमा कल गर्न नपाउने अवस्था छ ।’
एनसेलले ९८ बाट सुरु भएको १० नम्बर रेञ्जमै टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएकाले टेलिकमबाट फोन त लाग्न सक्छ । तर, त्यसको लागि ग्राहकको सिमबाटै पैसा काटिन्छ ।
कसैकोमा कल नलाग्ने अनि कसैकोमा कल लागिहाले पनि पैसा लाग्ने भएपछि यस्तो सिस्टम वास्तवमा टोल फ्री नै नभएको उनको तर्क छ ।स्थापित अगाडि भन्छन्, ‘टोल फ्रीका लागि टेलिकमले १६६० बाट सुरु भएको ११ अङ्कमा आधारित नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै एनसेलले अङ्कको नम्बर वितरण गरिरहेको छ । यसरी सेवा प्रदायक अनुसार टोल फ्री नम्बर समेत फरक नहुनु पर्ने हो । त्यसैले हामीले टोल फ्रीलाई व्यवस्थित गर्न शर्टकोड कार्यविधिबाट टोल फ्री नम्बर १० अङ्ककै हुने पर्ने र त्यसको सुरुवाती अङ्क १८०० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियौँ ।’
यसले १८०० बाट सुरु भएका सबै नम्बर टोल फ्री नम्बर हुन् भनेर पहिचान् गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने प्राधिकरणको उद्देश्य हो । साथै त्यस्ता नम्बरमा नेपालका सबै सेवा प्रदायकबाट फोन लाग्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, प्रस्तावित नयाँ नम्बरमा नेपाल टेलिकमले भने केही प्रश्न उठाएको छ ।
स्थापित भन्छन्, ‘टेलिकमले हाल ११ अङ्कको टोल फ्री नम्बर प्रयोग गर्दै आएले नयाँ नम्बरमा जाँदा समस्या हुने बताएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ११ अङ्ककै टोल फ्री नम्बर प्रयोगमा रहेको पाइयो ।’
‘यसो हुँदा टेलिकमले केही परिमार्जनका लागि आग्रह गरेको हो । टेलिकमले गरेको उक्त आग्रहकै आधारमा हामी शर्टकोड कार्यविधिमा केही संशोधनको तयारीमा अघि बढेका छौँ । त्यसैले हाल यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।’
कार्यविधि संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले बढीमा दुईतीन महिनाभित्रै यी सबै कुराको सम्बोधन हुने उनी बताउँछन् ।
‘अहिले पनि कार्यविधिमा एउटा सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको टोल फ्री नम्बरमा अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट कल गर्दा लाग्ने गरि इन्टरकनेक्सन लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सँगसँगै रिभर्स इन्टरकनेक्सन पनि लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
रिभर्स इन्टरनकनेक्सन अर्थात यदि नेपाल टेलिकमलबाट कुनै कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ भने उक्त टोल फ्रीमा एनसेलका प्रयोगकर्ताको कल आउँदा हुने आम्दानीको केही हिस्सा टेलिकमले एनसेललाई उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हो ।
यसो हुँदा जुनसुकै टोल फ्री नम्बरमा कल गर्दा प्रयोगकर्ताको सिमबाट कुनै पैसा लाग्ने छैन । ‘रिभर्स इन्टरकनेक्सन सोचे जस्ता सहज नभएको राय सेवाप्रदायकबाट आइरहेको छ,’ स्थापित भन्छन्, ‘तर, हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनिरहेका छौँ । जब नयाँ नम्बर र नम्बर रेञ्ज तय हुन्छ, तब यी सबै कुरा समाधान हुनेछन् ।’
The post नेपालका ‘टोल फ्री’, एउटा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा लाग्दैन, लागे पैसा तिर्नुपर्छ appeared first on Tech News Nepal.
आईफोन १३ लाइनअपको माग घटेको एप्पलद्वारा आपूर्तिकर्तालाई जानकारी
फेसबुक पोस्टमा लाइक संख्या लुकाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा शुक्रवार सार्वजनिक बिदा